Shirka kasoo kabashada Abaarta Simma oo Garowe lagu Gaba-Gabeyeey (dhegayso+Sawiro) – Radio Daljir
Siteenbar 14, 2017 1:24 g 0
Magaalada Garoowe waxaa lagu soo gaba gabeyay Shir lagu dejinayay qorshe ku saabsan u adkeysiga iyo dib usoo kabashada abaarta ka dhacda deegaanada Puntland.
Shirka oo maalintii shalay ka furmay magaalada Garowe, ayaa waxaa waxaa ka qeybgalay masuuliyiin ka tirsan Hay’addaha Dawladda, Mr Andrew Lanyon oo ah madaxa mashruuca SomRep ee Puntland,Masuuliyiin ka socda Hay,addaha Samafalka iyo Dhalinyaro.
Barnaamijkan waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda Qorsheynta iyo xiriirka Caalamiga ee Puntland iyo Hay,addo ku mideysan Dallada SOMREP waxaana muddo labo maalmood ah oo uu socday lagu soo bandhigay qiimeyn lagu sameeyay 8 degmo oo ka tirsan Puntland kuwaas oo ka mid ah deegaanadii ay ka dhacday Abaartu.
Abaartii Simma ee ku dhacday Soomaaliya ‘ayaa deegaanada Puntland ku arakicisay dad gaaraya 32 illaa 35 kun oo qoys iyadoona baa bi’say %50 xoolahii dadkaasi ay dhaqan jireen.
Maxamed Axmed Cali (Geelle) oo ah la taliye sare oo ka tirsan Wasaaradda Qorshaynta iyo xiriirka caalamiga ah Puntland ayaa idaacadda daljir faah faahin ka siiyay markii shirkii soo dhammaaday,natiijadii kasoo baxday ,wariye Axmed Sheekeeye ayaa waraystay .